कस्तो रह्यो अनमोलको भाइटीका? - Everest Dainik - News from Nepal
कस्तो रह्यो अनमोलको भाइटीका?
२०७६, १२ कार्तिक मंगलवार
काठमाडौंः नेपाली चलचित्रका चर्चित नायक अनमोल केसीले बहिनी प्रान्सु केसीसँग भाइटीका लगाएका छन् ।
गतबर्ष अनमोलले दिदी काजोलको साथमा बहिनीद्धय रुवि र प्रान्सु केसीसँग भाइटीका लगाएका थिए ।
तर, यसपटक भने उनले बहिनी प्रान्सुसँग मात्र टीका लगाएका छन् । यस्तै, नायक भूवन केसीले पनि भाइटीका लगाएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस भाइटीकाको भोलिपल्ट पनि सार्वजनिक बिदा !
अनमोलले तिहार आफ्नो लागि सधै नै विशेष पर्वको रुपमा रहेको भन्दै दिदी–बहिनीले दिएको आशिष दाजुभाइलाई सधै नै लाग्ने गरेको बताए ।
उनले बहिनीसँग टिका लगाउँदा खुशी लागेको भन्दै भाइटीका यसपटक पनि विशेष भएको सुनाए ।
नायक केसी तिहार लगतै नयाँ चलचित्र ‘धुपौरे’को छायांकनमा व्यस्त हुने छन् ।
याे पनि पढ्नुस आज तिहारको पाँचौ दिन भाइटीका, टीकाको उत्तम साइत कति बजे?
ट्याग्स: अनमोल केसी, भाइटीका